I-ESRI isungula uhlelo oluthile ukwenza i-GIS ifikeleleke ngakumbi kubafundi baseyunivesithi- iGeofumadas
Matshi, 2012 ArcGIS-ESRI, Ukufundisa i-CAD / GIS
Esri unikezela abafundi ArcGIS yabaFundi, udidi olukhethekileyo oluneenkqubela phambili kunye nenkqubela phambili kwezobugcisa bokuhlalutya kunye nokujoliswe kubafundi beyunivesiti.
Ukusetyenziswa okuqhubekayo kobugcisa be-Esri kwiYunivesithi kunye neemfuno ezizodwa kunye neemeko zabafundi, wenze u-Esri abekeArcGIS yabaFundi, Isixhobo esikhethekileyo esikuvumela ukuba uphuhlise ngokulula iiprojekthi, ukunikezelwa kweklasi kunye nophando ngeemephu, idatha kunye nolwazi lwendawo. Esi sisombululo siququzelela ukubanakho kokwabelana ngomsebenzi nabanye abasebenzisi ngaphandle kwesidingo sophuhliso kunye nokusebenzisa ulwazi esele lukhona ngokufaka isixhobo nakweyiphi na ikhompyuter.
"I-ArcGIS yabaFundi yinto ehamba phambili kwimeko yobudlelwane bomfundi kunye ne-GIS kunye nezifundo zabo, izifundo, njl. nge ArcGIS yabaFundi abafundi abayi kusayi kuxhomekeka kwiqela leYunivesithi, kodwa baya kukwazi ukusebenza kwiqela labo. Lithuba elihle kubo bonke abafundi baseyunivesithi abasebenzisana ne-GIS, kuba baya kuba nokufikelela okulula kule teknoloji ",
Utsho uPedro Rico, onoxanduva lweMfundo ye-Esri Spain.
Nayiphi na umfundi obhalise kwiYunivesithi angafumana ilayisenisi yonyaka evela I-ArcGIS yeDeskithophu ephakamileyo, kunye nazo zonke izongezo zayo ngexabiso eliphantsi kakhulu. Ukongezelela, kuya kuba nolwazi oluncedisayo kunye nezinto eziphathekayo, kwakunye nemininimarha yamahhala yokuphucula ukusetyenziswa kwesixhobo.
Ukuqhubeka nemfundo kwi-ArcGis yabaFundi
Ukuqaphela isidingo sokuba abafundi baqeqeshwe ngokukhuphisana ngokuhlalutya ngolwazi, u-Esri unikela abafundi abanezinto ezininzi zokuxhasa ukufumana uqeqesho oluqhubekayo malunga ne-ArcGIS: isikhungo sobonelelo, iifom, Iimbono zeArgGIS, iividiyo, njl
Ukuze kuququzelele ukufikelela kunye nokusetyenziswa kwabafundi kwizixhobo zabo, uEsri uququzelela Iisemina zokuhamba iintsuku zonyaka, zikhululekileyo apho iindawo ezintsha ezenziwe nge-ArcGIS zihanjiswa kwimicimbi yangoku, njengefayile ye-GIS okanye uphuhliso lwesicelo seselula. Kwakhona, kwiintlanganiso ze-intanethi, ehlelwe ngu-Esri, nayo iyafumaneka kubo bonke abafundi abahlawulelwayo kunye nenyanga.
Okungakumbi malunga netekhnoloji yeArcGIS
I-ArcGIS yinkcazelo epheleleyo yenkcazelo evumela ukuba udale, uhlalutye, ulondoloze uphinde usasaze idatha, imodeli, iimephu kunye neebhaluni kwi-3D, okwenza ukuba zifumaneke kubo bonke abasebenzisi ngokweemfuno zabo. Njengenkqubo yolwazi, i-ArcGIS ifumaneka kwiinklayenti zedeskithophu, iziphequluli zewebhu kunye neziphelo ezihambayo ezixhuma kwiinkonzo zamasebe, iinkampani zenkampani okanye i-computing (Cloud Computing). Kubaphuhlisi, i-ArcGIS inikeza izixhobo eziya kubavumela ukuba benze izicelo zabo.
Kwakhona, mbulela ArcGIS onlineIsisombululo esipheleleyo se-SaaS, sikuvumela ukuba wenze iimephu ezifanelekileyo zasimahla kwaye wabelane ngazo nabanye abasebenzisi be-GIS kwihlabathi liphela ngokusekwe kubuchwephesha belifu.
Uqeqesho lwe-GIS kubo bonke
I-Esri Spain ibonelela ngeesemina kunye nezifundo zoqeqesho ezijolise koosomashishini babafundi base-Esri, abathengi, amaqabane, abasebenzisi kunye nabangengabo abasebenzisi. Olu qeqesho lujolise ekunikezeleni uluntu ngokubanzi kunye neenkampani lonke ulwazi oluyimfuneko malunga neNkqubo yoLwazi lweJografi, kunye nohlaziyo olutsha kunye nolwakhiwo kulwakhiwo lwe-GIS kwilifu, ukwenzela ukuba bazi kuqala izibonelelo zesixhobo .
Ngolwazi olungakumbi malunga Iprogram ye-GIS yoQeqesho ye-GIS e Umbhalo ungabheka iphepha lewebhu http://www.esri.es/es/eventos/
Esri Spain Umsebenzi wayo kukufaka isandla kuphuhliso lwemibutho, ukubonelela ngemveliso kunye neenkonzo ezisemgangathweni kunye nezinto ezintsha, ukubanceda benze izigqibo ezingcono. U-Esri unamava kunye nezixhobo zokuhlangabezana neemfuno zabathengi kumacandelo afana nolawulo, ezemfundo, izixhobo zendalo, ezonxibelelwano, izixhobo, ezokhuselo, ezentengiso, izixhobo kunye nezothutho.
ICamino Ballesteros Blanca Ruiz
Ifowuni: 915 594 375 Abla Bennoud
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-Cybernetics, inkonzo enkulu yokubamba
Post Next Inkqubo yoLwazi lweJografi isebenzisa iManfold GISOkulandelayo »